Yan Aung: April 2007
ကိုယ့်ရင်ထဲက ဆန္ဒလေးတစ်စုံကို ဒီပုလင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ မျှောလိုက်တယ်…
ပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ဖြတ်ပြီးတော့ မင်းလေးရှိမယ့်နေရာဆီကိုပေါ့….
ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ အလုပ်တွေ ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ထွက်ပေါက်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာ.
စာမူဘလော့ဂ် မှာ မဲစပေးလို့ရပါပြီ. IP ရော၊ Cookies ကိုရောပါ Lock လုပ်ထားပါတယ်. အောင်မြင်ပါတယ်. အားပေးကူညီတဲ့သူတွေ အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
စာမူဘလော့ဂ်၊ သတင်းဘလော့ဂ်နဲ့ Tag Game ဘလော့ဂ် သုံးခုလုံးကို EOT လုပ်ပေးထားပါတယ်. အဆင်မပြေရင်လည်း ပြန်ပြောကြပါဦးလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ...
ဘလော့ဂါညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကစားကြတဲ့ Tag Game လေးကို တစ်နေရာတည်း စုစုစည်းစည်းလေး ဖတ်လို့ရအောင် ဘလော့ဂ် လေးတစ်ခု ဖန်တီးထားပါတယ်.
ပါဝင်ချင်သူများ blogtagger@gmail.com ကို လင့်ခ်ပို့ပေးပါ. ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ခါတည်း Text လေးတွေကို Format လုပ်ပြီးပို့ပေးပါ. ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က တစ်ခါတည်း Copy Paste လုပ်ရုံပဲလေ. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.
တကယ်လို့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာထဲမှာ လင့်ခ်လေးတွေပါနေရင်လည်း ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်.. အားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခုနဲ့ပါပဲ….
ဩော်. ကြည့်စမ်း. မေ့နေလိုက်တာ. အရေးကြီးတာကျန်သွားပြီ. ဘလော့ဂ်လေးရဲ့နာမည်ကို သိချင်မှာပေါ့ဗျာ. ဟုတ်ဖူးလား နာမည်လေးက ထူးဆန်းတယ်ဗျ
ငါဘယ်သူ့ကိုချစ်နေလဲဆိုတာ တစ်ခါမှ မမေးခဲ့ဖူးဘဲနဲ့
အောက်ပါ ခေတ်လွန်ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကိုမှီငြမ်းရေးသားပါသည်...
Posted By Yan 51 Comments
စာအုပ်နာမည်ရွေးချယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ရြဲ့ပန်တမ်းကို သတင်းဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားပါတယ်. မဲကိစ္စကိုအမြန်ဆုံး ကူညီပေးစေလိုပါတယ် ညီအစ်ကိုတို့ရေ. ကျွန်တော် PollDaddy သုံးတာ စာလုံးဝမပေါ်ပါဘူး. တစ်ခြားဘာ Poll ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးကြပါဦး...
ပြုံးချင်စရာဓာတ်ပုံလေးများ ကဏ္ဍပါ. လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သဘာဝကျကျ ရယ်မောစရာ ဖြစ်ရပ်လေးများလည်း ပါသလို အဆီအငေါ်မတည့်တဲ့ ဟာသဖြစ်ရပ်လေးများလည်း ပါဝင်ပါတယ်. နောက်ထပ်ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ် ခင်ဗျာ…
ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ တစ်ခုခုမရှိရင်လည်းရတယ်. ရင်ခွင်ထဲမှာ တစ်ခုခုထားပြီး အိပ်ရင်၊ တစ်ခုခုကို ခွပြီးအိပ်ရင်လည်း အိပ်ပျော်တတ်တယ်. (သဘောပေါက်နော်).
ဟဲဟဲ ဘာရမလဲ. ကျွန်တော်လည်း ရင်ကိုကော့ထားတာပေါ့. ခေါင်းထဲမှာတော့ ဖေမြင့်ရဲ့ စာတစ်ကြောင်းက ပြေးနေတယ်.
`ဦးနှောက်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ´ တဲ့..
၁၀. နောက်ဆုံးထူးဆန်းတဲ့ အကျင့်တစ်ခုကတော့ ဒေါသကြီးပြီးအရမ်းအရွဲ့တိုက် တတ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်လည်း ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပိုများတတ်သလို သူများတွေနဲ့ မတူထူးခြားစွာလည်း အောင်မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်. ဆံပင်ညှပ်ရင် တစ်ခါစိတ်တိုရပါတယ်. ကျွန်တော့်ဆံပင်ကို ပုံစံကျအောင် ညှပ်တတ်တဲ့ ဆံသဆရာ ခပ်ရှားရှားပါ. ကျွန်တော့်ခေါင်းက ကြီးပြီး ဆံပင်အလွန်သန်ပါတယ်. ရှည်လာရင် ဘေးကို ကားထွက်လာရော. တိုလွန်းရင်လည်း ကြည့်မကောင်းပြန်ဘူး. ဒါကြောင့် ဆံပင်ကို အလယ်မကျ ဘေးမကျ စကခွဲလေးခွဲပြီး အရှည်ထားပါတယ်. လောလောဆယ် ရွှေအိုရောင် ဆိုးထားပါတယ်. စိတ်နည်းနည်းညစ်ရင် ဆံပင်ပုံစံပြောင်းပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တော်စိတ်ခဏခဏ ညစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ဆံသဆရာ အလွန်ပျော်ပါတယ်.
တစ်ချို့က ခေါင်းမာတယ်လို့ ပြောတတ်သလို တစ်ချို့ကတော့ ဇွဲကောင်းတယ်လို့ ပြောပြန်ပါတယ်. ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနေတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် ဇွတ်တရွတ်နဲ့ အရွဲ့တိုက်တတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
၁. မေဓာဝီ (အစ်မကြီးပျင်းနေမှာစိုးလို့ပါ)
၂. မသဉ္ဇာ (Done)
၃. ကိုမျိုးကျော်ထွန်း (Done)
၄. ညလေး (Done)
၅. သဲလေး (Done)
၇. ကိုဝေယံလင်း (Done)
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ….
ဒီ Tagging Game ကိုလိုက်ရေးပြီး နောက်ထပ် ဘလော့ဂါ အနည်းဆုံး ၆ ယောက်ကို ထပ်ပြီး Tag တဲ့သူတွေ DV Lottery ပေါက်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာ American Lottery ဆက်ပေါက်တယ်တဲ့ဗျာ.
စာမူဖတ်ဖို့ခွဲဝေထားကြတဲ့ Listing ကို သတင်းဘလော့ဂ် မှာသော်လည်းကောင်း၊ ကိုစိုးဇေယျ ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာသော်လည်းကောင်း ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ…
ဘလော့ဂ်လမ်းညွှန်အတွက် ဘလော့ဂ်လိပ်စာအသစ်များကို ကူညီဖြည့်စွက် ပေးနေတဲ့ ကိုမျက်လုံး ရဲ့ ပို့စ်ကိုလည်း တစ်နေရာတည်းမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ….
ကျွန်တော်ပဲ နားကြားလွဲတာလား တကယ်ပဲလားမသိဘူးဗျာ. နားထဲမှာ သေနတ်သံ ၅ ချက် ကြားလိုက်ရတယ်. အိပ်ချင်နေတဲ့ မျက်စိတွေတောင် ပြူးသွားတယ်. ဆဲတဲ့ အသံတွေလည်း ကြားလိုက်ရတယ်. ဘာတွေလဲဗျာ. စာမေးပွဲနီးလို့ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ဖောက်ပြီနဲ့ တူတယ်. မေတ္တာလေးဘာလေး ပို့ပေးကြပါဦးဗျို့…. မီးကို ကမန်းကတန်းထပိတ်ပြီး လမ်းဘက်ကို လှမ်းရှိုးလိုက်တော့ အားလုံးကလည်း ငြိမ်သက်နေတာပဲဗျ. ခု မနက်ခင်း ၄း၁၀ မိနစ် ရှိပြီ...
ဩော်. မနှစ်က ကျွန်တော်တို့ နေတဲ့ အဆောင်ကို အပြင်ကနေ သေနတ်နဲ့ ၃ ချက်ပစ်သွားတယ်ဗျ. မှန်ကွဲသွားတယ်. မှန်က ၂ ထပ်လေ. မှန်မရှိရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ကြွပြီဗျ. စကားစပ်မိလို့ ပြောပြတာပါ. ခုတော့ ကျွန်တော်က အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တိုက်ခန်းဌားနေတယ်လေ….
မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ သိရမှာပါ. သေချာတာကတော့ ဒီမှာ ဗျောက်ဖောက်တဲ့ အလေ့အထ သိပ်မရှိဘူးဗျ. ကားဘီးပေါက်တဲ့ အသံနဲ့လည်း မတူဘူး. မသိဘူးဗျာ. ခေါင်းကိုနောက်သွားတာပဲ. ကျည်ကာ အင်္ကျီတောင်ဝယ်ဖို့ လိုပြီနဲ့တူတယ်….
အမေရိကားကို လာချင်တဲ့ ဘော်ဘော်ဘလော့ဂါများ အကူအညီလိုရင် ကျွန်တော့်ကို ပြောနော်. အသက်အာမခံ company မှာ အသိတွေ ရှိတယ်ဗျ.
တစ်ယောက်တည်း ရည်းစားမရှိဘာမရှိနေရတာ ခုလို အသံဗလံတွေ ကြားရင် ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတယ်ဗျာ. (ကြော်ငြာဝင်တာပါ…)
စခန်းရဲ့ break time မှာပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော် အရမ်းကို ဗိုက်ဆာလာတယ်. တော်သေးတာပေါ့. ဒီစခန်းက ညစာပေးစားလို့. ဟိုတစ်နေ့က ချက်ထားတဲ့ ၀က်သားနဲ့ ပြောင်းဖူးကြော်လည်း ကုန်တာကြာပေါ့. မြန်လွယ်ကောင်း ဘာချက်ရမလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့ ငါးသေတ္တာချက်ဖို့ စိတ်ကူးရသွားပါတယ်. ငါးသေတ္တာချက်တာလောက်လွယ်တာ ငါးသေတ္တာပဲ ရှိပါတယ်. ဘာမှ အုန်းစားစရာကို မရှိပါဘူး. ကြက်သွန်ဆီသတ်ပြီး ငါးသေတ္တာ လောင်းထည့်လိုက်ရင် ပြီးရောပဲ. ဒါဖြင့် ဘာလို့ ရေးနေသေးလဲဆိုတော့ ရှင်းပါတယ်. ရေးချင်လို့ကိုရေးတာပါ.
ပန်းချီဆရာကောင်းဟာ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်အောင်ဆွဲရတယ်။ အနုပညာသမားကောင်းဟာ ကျရာနေရာမှာ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ရတယ်။ ဒီလိုပဲ စာရေးဆရာကောင်းဟာလည်း ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်၊ လိပ်ကို ကင်းကောင်ဖြစ်အောင် ရေးတတ်နိုင်ရတယ် ဆိုတဲ့ ပညာရှိထုံး နှလုံးမူပြီး ငါးသေတ္တာချက်တာကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာဖြစ်အောင် ဦးနှောက်ဆေးတဲ့ အနေနဲ့ ရေးပါတယ်ခင်ဗျာ… ဩော် ကျွန်တော်ချက်မှာ ငါးသေတ္တာဟင်းနော်. ကြမ်းပိုးဟင်း မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ….
ကြက်သွန်နီဥ နှစ်လုံးလောက်ကို မပါးမထူ အနေတော်လောက်လေးတွေကို ဓားထက်ထက်လေးနဲ့ တောက်တောက် တောက်တောက်မြည်အောင် လှီးလိုက်ပါ. လက်တော့ မလှီးမိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ. လက်ချောင်းလေးတွေကို အထဲကို ကွေးပြီး လှီးရတယ်. ပြီးရင် ဒယ်အိုးကို ပြောင်နေအောင် ရေအေးအေးလေးနဲ့ စင်အောင်ဆေးပြီးတော့ မီးဖိုပေါ်တင်ထားဗျာ. မီးနဲ့ ချက်မှာကိုးဗျ. မီးဖိုပေါ်တင်ရမှာပေါ့နော်…
အဲဒီ့အချိန်လေးမှာပဲငါးသေတ္တာဘူးလေးကို ကင်းကတ်လေးနဲ့ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လှည့်ပြီးဖောက်လိုက်ပါ. ဘာညာရေ… နံပတ် ၁ နည်းနဲ့ လှည့်ဖောက်မှာနော်. နံပါတ် ၃ ဆိုလို့ကတော့ ဟင်းဟင်းဟင်း…
ဆီကို အနေတော်လောက်ထည့်ပြီးရင် ပူအောင်ထားလိုက်ပါ. ပူပြီလား. ပူသေးဘူးဗျ. ထားလိုက်ဦး. ၅ မိနစ်လောက်ဆိုရင် ဆီပူက အငွေ့လေးတွေ ထွက်လာလောက်ပြီ. ထပ်မထားနဲ့တော့နော်. ဆီပူက မီးလောင်တတ်တယ်. အိုကေ. ကြက်သွန်ဖြူနီကို ထည့်ဗျာ. ဆီသတ်ဗျာ. ဒီကြားထဲ ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိလို့ ကျွန်တော်ကတော့ ကော်ဖီလေး သောက်နေလိုက်တယ်ဗျ. ပုံမှာ ရှုစားပါ. Dell Computer က ပေးတဲ့ ကော်ဖီခွက်နော်. ဟင်းဟင်း အချဉ်မဟုတ်ဘူး. (ကော်ဖီပါဆိုမှ ဘယ်ချဉ်ပါ့မလဲဗျာ. နော့)
ခဏနေတော့ ကြက်သွန်လေးတွေက ဖြူတစ်ဝက်၊ ၀ါတစ်ခါ၊ နီတစ်လှည့်လေး တွေဖြစ်လာပါပြီ. ဟိုကဗျာလေးထဲကလိုပေါ့ဗျာ.
`တိမ်ညိုမိလ္လာ တိမ်စူကာနှင့်၊ တိမ်ပြာရောယှက် မရမ်းဖက်၍ တိမ်သက်တံ့ရောင် အာကာဘောင်ဝယ် မှောင်ခဲ့တစ်ခါ ပြာခဲ့တစ်လီ ရီခဲ့တစ်ဖုံ´ ဆိုသလိုပေါ့.
ဟုတ်ကဲ့ ကြက်သွန်အရောင်ကိုပြောနေတာပါ. ဆိုင်သလားလို့ ကုဒ်လုပ်ကြည့်လိုက်တာ.
၀ါတစ်ခါ နီတစ်လှည့်ဆိုရင်တော့ ငါးသေတ္တာဘူးလေးကို ညာဖက်လက်နဲ့ အနေတော်လောက်လေး မြှောက်ကိုင်ပြီး အိုးထဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လောင်းထည့်လိုက်ပါ. အရမ်းလောင်းထည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ. ဆီပူမှန်ပါလိမ့်မယ်. အမြင့်ကြီးက လောင်းထည့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ. အရှိန်နဲ့ ပြုတ်ကျပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျ..
ဟုတ်ကဲ့ ပြီးသွားရင်တော့ အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါ. ငါးသေတ္တာဘူးထဲမှာ ရေပါပြီးသားပါ. ထပ်ထည့်စရာ မလိုပါ.. ဆားအချိုမှုန့်တောင် အနေတော်လေး လက်ဖ၀ါးလေးထဲကနေ တစ်ဆင့် ထည့်ပေးပေါ့ဗျာ. အပိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်. အရှိန်လွန်သွားရင် ဟင်းအိုးပျက်ရော..
ကဲကဲ မိနစ် ၂၀ Timer ပေးထားတယ်. အဲဒီ့အတွင်းမှာ ဒီပို့စ်လေးကို အပြီးရိုက်တာ. ဟုတ်တယ်ဗျ. ကျွန်တော် မြန်မာ လက်ကွက်ရိုက်တာ တော်တော် တိုးတက်လာတယ်. ဖျောင်းဖျောင်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်တောင် ကျွန်တော့်စာရိုက်တဲ့ နားမကပ်ရဲဘူး. မမြ၀င်းနားပဲ ကပ်နေတယ်…..
တော်လောက်ပါပြီ. ဒီလောက်ဆို ကြမ်းပိုးလည်း ကင်းကောင် ဖြစ်လောက်ပါပြီဗျာ…
ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကို တော်တော် သံယောဇဉ်ရှိတယ်ဗျာ. ပြတ်လို့ကို မရဘူး. ဒါကြောင့် ခဏ ပြန်လာရေးတာ. ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ. စကားကြီးသုံးခွန်းကို အသုံးချပြမယ်
မဂျစ်တူး။ ။ မောင်ရန်အောင်. မင်းချက်တဲ့ ဟင်းက ရောသမမွှေကြီးပါကွာ. ကောင်းရော ကောင်းပါ့မလား
ကျွန်တော်။ ။ I’m sure..
မသဉ္ဇာ။ ။ ကိုရန်အောင့် ဟင်းက ကြည့်ရတာ မဆိုးပါဘူး. ပုံလေးကတော့ စားချင်စရာလေးပဲနော်.
ကျွန်တော်။ ။ It’s cool!
ဘာညာ။ ။ တွား… ကိုရန်အောင့်ဟင်းကြီးက ဘာပုံကြီးမှန်းလဲ မသိဘူး. တစ်ခါလာလည်း ကြက်သွန်ဆီသတ်၊ တစ်ခါလာလည်း ကြက်သွန်ဆီသတ်ကြီးနဲ့ပဲ အရောင်လည်း ရှိဘူး.. ကွိကွိ…
ကျွန်တော်။ ။ I don’t care!
စားလိုက်ဦးမယ်. ခဏနေ စခန်းထဲ ပြန်ဝင်ရဦးမှာ.
Flash ဖြုတ်ရိုက်လိုက်တယ် မဂျစ်ရေ.. မြင်ရပြီလား.. စားလို့ကတော့ ကောင်းဗျာ… ထမီစကတ်ဝတ်ထားသူများ ကြိုးလျှော့၍စားကြပါ….
ဘာညာရေ. နံပါတ် ၁ နည်းဖြင့်သာ စားခွင့်ပြုသည်နော်..
ကျန်တဲ့ ဘော်ဘော် ဘလော့ဂါများကိုလည်း ထမင်းစားဖိတ်ပါတယ်. လောက်အောင် ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယ် တိုက်ယူကြပါ.. ဒန်တန်တန်
စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေပါ. ချစ်စရာလေးတွေမို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်….
ဘလော့ဂ်မှာ ပြုံးချင်စရာလေးများ စီးရီးကို အပြီးသတ်ပြီးသကာလ Gtalk ထဲ ၀င်လိုက်တယ်.
အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘော်ဘော်တွေကို တန်းစီပြီး တွေ့လိုက်တာနဲ့ တွေ့သမျှ ဘော်ဘော်တွေကို chatting ထိုင်ပစ်လိုက်တယ်. ကျွန်တော့်ရဲ့ Chatting တစ်ညတာလေးကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
ကိုစိုးဇေယျက ဘယ်တောင်ပံအထက်မှာပေါ့ဗျာ. လိမ့်ကာလိမ့်ကာနဲ့ပဲ ဘလော့ဂါ Directory လေးကို ကြိုးစားပမ်းစား ပြုစုနေတယ်ဗျ. အလယ်မှာတော့ ဘာညာကိုတွေ့ရပါတယ်. ချက်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်း ဘာညာတစ်ယောက် တစ်ကွိကွိနဲ့ တုပ်ကွေး Symptom တွေကို ပြသနေပါတယ်. ပွဲစပြီး ၁၀ မိနစ်အကြာမှာပဲ ဘာညာဆက်မချက်နိုင်တော့ပါဘူး. ၀ိတ်လျှော့နေတာမို့ ထမင်းသွားစားဦးမယ်ပြောပြီး အိပ်မက်တွေပေးကာပေးကာနဲ့ ထွက်သွားပါတယ်. ညာတောင်ပံမှာတော့ ရိုနယ်လ်ဒိုဆံပင်သွင်သွင်ကျိုးသွားလို့ အစားဝင်လာတဲ့ ကိုမျိုးကျော်ထွန်းကြီးက သူ့ဆံပင်တွေကို ကော်စမက်တစ်တွေပွတ်ပြီး ၀င်လာတယ်ခင်ဗျ
ဘယ်တောင်ပံအောက်ဘက် Start Menu ပွဲကြည့်စင်ဘက်မှာတော့ ကိုနေဘုန်းလတ်တစ်ယောက် ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီး ဘလော့ဂင်းလုပ်နေလေရဲ့. သူတို့မြို့နယ်ဘက်မှာ မီးတွေ မလာလို့ညစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြုံးစိစိနဲ့ ငြီးနေလေရဲ့ဗျာ.
ညာတောင်ပံက ကိုမျိုးကျော်ထွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာတော့ (ဟာ မဟုတ်သေးပါဘူး) ညာတောင်ပံက Language Bar လေးနားမှာတော့ ကိုရဲဇေယျရှိန်ပေါ့ဗျာ. ၁၉ နှစ်သားလေးပါ ခင်ဗျ. ဘလော့ဂါ နယူးဘီလေးအဖြစ် အမြဲတမ်းပြောပြီး ကုဒ်ဒင်းတွေကို အားရပါးရ မေးတတ်သူလေးတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ….
ကဲ..ဒီလောက်ပါပဲ. စိတ်ဝင်စားသူများရှိရင်လည်း စာရင်းပေးပါ. အားလို့ကတော့ အကုန်လုံးကို Desktop ပေါ်မှာကို ဆွဲတင်ပြီး ချက်ပစ်ဦးမှာ…
ဒါပေမယ့် ငါခုချိန်ထိ မားမားမတ်မတ် ရပ်နေဆဲပဲ
ငါ့ရဲ့ ရဲရင့်မှုတွေကို အမှောင်ထုက ၀ါးမြိုဖို့ ကြိုးစားနေတယ်.
ဒါပေမယ့် ငါဒီအင်အားတွေကို ကြိုးစားတွန်းလှန်နေဆဲပဲ
ငါ့ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေကို ကျရှုံးမှုတွေက လှောင်ရယ်နေကြတယ်
ဒါပေမယ့် ငါကတော့ မြဲမြံတည်ကြည်နေဆဲပဲ.
လောကကြီးက အသာတကြည်နဲ့ မပေးအပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေရှိတယ်
ငါ့ဝိညာဉ်ကိုတော့ ဘယ်အရာကမှ မသတ်နိုင်ဘူး
ငါ့ရဲ့အရိုးတွန်သံကိုတော့ ဘယ်အရာကမှ မဖျောက်ဖျက်နိုင်ဘူး
ငါ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကိုတော့ ဘယ်အရာကမှ မဖြိုလှဲနိုင်ဘူး
ဒါပေမယ့် ငါ့အသိဥာဏ်တွေ လင်းလက်တောက်ပနေဆဲပဲ…
ဒါပေမယ့် ငါယုံကြည်စွာ မီးလျှံတွေကို နင်းဖြတ်နေဆဲပဲ..
နွေရာသီရဲ့ သရုပ်သကန်လေးတွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ရတော့ ဟိုတစ်ချိန်တုန်းက ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို သတိရတမ်းတမိလာတယ်ဗျာ. အဲဒါနဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို အခေါက်ခေါက်အခါခါဖွင့်ရင်း ရင်ထဲက ဝေဒနာလေးတွေကို ကုစားနေလိုက်တယ်.
လွမ်း. ရင်ထဲရှိတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း
နွေရာသီ ရွက်ကြွေ မြေပေါ်ပြေးလွှားလို့ လွင့်နေစဉ်မှာ
ဟိုအစဉ်အချိန်တွေခါ သူရယ်တို့နှစ်ဦး ရင်းနှီးသလို
ပညာရင်းနဲ့ ကျောင်းကြီးရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ
ချစ်ကြသူတွေ အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်
သိပ်ချစ်သူတွေလို့ အများက သတ်မှတ်ခဲ့တယ်
ငယ်စဉ်ဟိုတစ်ချိန်က တို့ဘ၀ရဲ့ အတိတ်ဒီဇာတ်အလွမ်း
အတူတူလျှောက်ဖူးတဲ့ လမ်းလေးရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်မှာ
ပန်းလေးတွေ အရင်အတိုင်း ဖူးပွင့်လျက်ပဲမို့
တို့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲ လွမ်းရတဲ့ စိတ်ကြောင့်လေ
လူ့သက်တမ်းဆိုတာ အင်မတန်တိုတောင်းပါတယ်နော်. ပုံမှန်အားဖြင့်တောင် တိုတောင်းနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ဥပစ္ဆေဒကံဆိုတဲ့ သူတစ်ပါးသတ်လို့ သေရတာမျိုးကလည်း ရှိသေးတယ်လေ.
ခုပဲကြည့်ဗျာ. ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး ကျောင်းတက်ဖို့သွားနေတဲ့ Virginia Tech University က အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေ သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို မသိရှာဘူး. သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရမ်းကားမှုကြောင့် အဆောင်မှာနေတဲ့ ကျောင်းသား ၂ ယောက် အရင်ဆုံး ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတယ်. နောက် ၂ နာရီကြာတော့ Science Building မှာ ထပ်ပစ်တယ်. အဲဒီ့မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၃၀ ထပ်သေတယ်။ သေနတ်သမားလည်း သေတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၃၃ ယောက် သေတယ်ဗျာ. ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာပဲ အားလုံး ဖြစ်ပျက်သွားတာ.
စိတ်မကောင်းစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ. ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာ ရှိနေတုန်း Professor က မင်းတို့ Email တွေ စစ်ကြည့်လိုက်ဦးဆိုတာနဲ့ အဲဒီ့ထဲမှာ ဒီ သတင်းအကြောင်းကို တစ်ကျောင်းလုံးသိအောင် Security Service က ပို့ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်. အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး စာသင်ခန်းတွင်း ပစ်သတ်မှုကြီးပါပဲတဲ့ဗျာ…
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာတော့ ဒါမျိုး တစ်ခါမှ မဖြစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး. ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြတာတွေတော့ အရင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ. ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဆွဲကြိုးချသေသွားတဲ့ မုခ်ဦးကို အားလုံးက ရှောင်ကြပါတယ်. အဲဒီ့အောက်ကဖြတ်လျှောက်သွားရင် ဘွဲ့မရဘူးဆိုတဲ့ အစွဲရှိပါတယ်.
ကျောင်းကတော့ ကျောင်းသားတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နော်. လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဆိုတာ ဘယ်မှန်းလို့ရမှာလဲ. အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတတ် တာမျိုးပဲ
ဒါတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားမိတယ်ဗျာ.
ဘ၀ဆိုတာ ရခဲပါတယ်. ကိုယ့်မှာ ကြုံတွေ့လာရတဲ့ တင်းကြပ်မှုတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးဘဲ ဖြေလျှော့တတ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်. ဒါတွေကို ဘယ်ကောလိပ်၊ ဘယ်တက္ကသိုလ်ကမှ မသင်ပေးဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ သင်ယူကြရတယ်။ ဒီတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ အထုအထောင်းဒဏ်တွေကို ခံနိုင်ဖို့ ခုကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ရင့်ကျက်ပြည့်ဝအောင် ပြုစုပျိုးထောင်သွားသင့်ပါတယ်. ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားခန်းဝင်နေမိတယ်ဗျာ….
ဘ၀မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ရှုံးနိမ့်နိမ့် ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ သေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့…..
မနက်ကတော့ ပစ်ပြီးကာစမို့လားမသိဘူး. Video Footage တွေ လိုက်ရှာတာမရဘူး. ခုတော့ youtube မှာ တွေ့တာနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်. သေနတ်သံတစ်ချက်ရဲ့အောက်မှာ အပြစ်မဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် လွင့်ကြွေသွားရသလို ခံစားရတယ်ဗျာ…
ကျောင်းသားတွေက Administration Office ကို အပြစ်တင်ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမပစ်ခတ်မှုက မနက် ၇း၄၅ မိနစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်. အဆောင်ကို ၀င်ပစ်တာပါ. ၂ ယောက်သေပါတယ်. နောက်ထပ် ပစ်ခတ်မှုကတော့ ၂ နာရီ အကြာမှာ နောက်ထပ် ၂ ဖာလုံလောက်ဝေးတဲ့ Engineering Building, Norris Hall မှာ ဖြစ်တာပါ. အဲဒီ့မှာ လူသေမှု အများဆုံးပါပဲ. ၃၀ သေပါတယ်.
ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်ပြောရာမှာ သူတို့က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူတွေက Email လေးတောင် မပို့ကြောင်း၊ ၂ နာရီကွာဟမှုအတွင်းမှာ ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဆင်ခြေပေးနေစရာ မရှိကြောင်း ပြောပါတယ်.
နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်မှာကျတော့ သေနတ်သမားလာမယ်ဆိုတာကို သိလို့ ကျောင်းသားတွေက တံခါးပေါက်ကို ခုံတွေနဲ့ ပိတ်ထားတယ်တဲ့. သေနတ်သမားက တံခါးကို ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်. အပြင်ကနေ သေနတ်နဲ့ လှမ်းပစ်တယ်. ၂ ချက်ပစ်တယ်. တံခါးပေါက်သွားတယ်. ကျည်ဆံထပ်ဖြည့်တယ်. ဖွင့်ဖို့ထပ်ကြိုးစားတယ်. နောက်ဆုံးမရတာနဲ့ တစ်ခြား classroom တွေကို ဆက်ကူးသွားပြီး အဲဒီ့မှာ ဆက်ပစ်တာတဲ့…
ပြီးတော့ရဲအဖွဲ့က Spokesperson က ပြောတာမှာ သေနတ်သမားက ကျောင်းသားလား၊ အပြင်ကလူလားတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းရဲ့ အဆောက်အအုံတွေအားလုံးကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သိနေတယ်တဲ့. အဆောက်အဦးထဲဝင်တာတောင် တံခါးပေါက်တွေကို ချိန်းကြိုးတွေနဲ့ ပိတ်ပြီးမှ ၀င်ပစ်တာတဲ့. ထွက်ပြေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ ပြတင်းပေါက်တွေပေါ်နေ ခုန်ချထွက်ပြေးကြရတယ်. တစ်ချို့တွေ ကျိုးပဲ့ကုန်တာပေါ့. ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် အောက်ရောက်ပြီး မထနိုင်တော့ဘူးတဲ့. ကျွန်တော်တင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ချို့ထဲမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်…
George Bush ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံတော်ကို မိန့်ခွန်းပြောပါတယ်. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကို မေးလိုက်တော့လည်း အားလုံး ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေကြတယ်. ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတုန်းက ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းနဲ့တစ်မျိုး၊ Email နဲ့တစ်သွယ် သတင်းမေး စိတ်ပူပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ..
ဒီတစ်ခါ ခေါင်းလောင်းထိုးသံက သိပ်ကို ကျယ်လောင်နေခဲ့တယ်. ရင်ထဲမှာ အချက်ပေါင်းများစွာ မြည်ဟီးပြီး ကျန်ခဲ့တယ်ဗျာ…